Taliska AMISOM oo ka hadlay mowqifkooda ku aadan maamulada iska soo horjeeda ee laga dhisay Kismaayo – idalenews.com
Taliska AMISOM oo ka hadlay mowqifkooda ku aadan maamulada iska soo horjeeda ee laga dhisay Kismaayo
Taliska ciidamada AMISOM ayaa markii u horeysay ka hadlay mowqifkooda ku aadan maamulada iska soo horjeeda ee laga dhisayo magaalada Kismaayo, maalmo kadib markii ay soo baxeen Madaxweynayaal iskood is magacaabay iyo kuwo loo doortay. Afhayeenka Ciidamada AMISOM Col. Cali Aadan Xumad oo la hadlay VOA ayaa sheegay inay si dhow u eegayaan xaalada Kismaayo iyo arrimaha ka taagan.
“Arrinta Kismaayo si dhow ayaa u eegeynaa, isha ugu heynaa, arrimaha ka taagan, hadii ay dhacdo dhibaato waxaa diyaar u nahay inaan dhex galno”ayuu yiri Afhayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xumad. Afhayeenka AMISOM ayaa sidoo kale sheegay in AMISOM mowqifkoodu yahay inay taageerto hadba aragtida siyaasadeed ee dowladda federaalka ka qaadato arrimaha Soomaaliya. Kismaayo ayaa waxaa ku sugan Ciidamo ka socda Kenya oo qeyb ka ah howl galka AMISOM, hase ahaatee waxay si dhow ula shaqeysaa Axmed Madoobe oo 15-kii bishan loo doortay Madaxweynaha Jubalanad.
Maamulada is bar bar yaaca ee Kismaayo looga dhawaaqayay ayaa murjiyay xaalada siyaasadeed ee deegaanada, iyadoo hadba shaqsi gurbaan loogu tumayo magaalada, waxaana jirta cabsi laga qabo inay isku dhacyo dhex maraan dhinacyada isku haya magaalada.